राधिका शाक्यको पुस्तकले खोलिदिएको माधवको त्यो अपराध « Janata Times
एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कतिसम्म अपराध गर्नुभएको रहेछ भन्ने तथ्य ओलीपत्नी राधिका शाक्यले लेख्नुभएको मेरा अनुभूति नामक पुस्तकले खोलिदिएको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै सार्वजनिक भएको शाक्यको पुस्तकको बैंककमा बिताएका त्रासद दिनहरु उपशीर्षकमा प्रस्तुत बिषयले माधवले गरेको अपराधलाई भण्डाफोर गरेको हो ।
शाक्यले लेख्नुभएको छ, ‘ माधव नेपाल, जसको सधैँभरिपार्टीको उपल्लो स्थानमा रहेर आफ्ना आसेपासेलाई सधैँ अवसर दिने र अलिकति मात्र असहमति जनाउनेलाई जिन्दगीभर उठ्न नदिने प्रवृत्ति थियो । आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न, टिकाउन र महासचिव बनाउन ठूलो सहयोग गर्ने साथीप्रतिको उहाँको व्यवहार हेर्दा र भनाइहरू सुन्दा मात्र पनि दिक्क लाग्छ । उहाँकै एकल महासचिवको पार्टी ब्युरोक्रेसीले चाकरी गर्नेलाई अवसर दिलाउन र फरक मत राख्नेलाई बोल्न समेत प्रतिबन्ध लगाउने गथ्र्याे । यसरी तेस्रो कार्यकालसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएका उहाँ एक पटक पनि पार्टीको नेतृत्व नगर्नुभएका केपीजीमाथि महाधिवेशनको मुखमा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि आक्रमणमा उत्रनुभयो । यसबाट दुःखी हुनु बाहेक के गर्न सकिन्छ र ?’
थाइलाण्डको राजधानी बैंकक हाम्रो लागि नयाँ ठाउँ होइन । २०५२ साल साउनको अन्त्यमा पहिलो पटक उपचारकै लागि हामी बैंककको समितिभेज अस्पताल गएका थियौँ । त्यहाँ चार पाँच दिन उपचार गराएर फर्केका थियौँ । त्यसपछि २०६४ साउनमा उहाँको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुअघि पनि एक दुई पटक बैंकक जाने क्रममा बुमरुङगार्ड अस्पताल गएर सामान्य चेकअप गराएका थियौँ । तर यसपल्ट २०७१ वैशाखमा अचानक बैंककको बुमरुङगार्ड अस्पताल पुग्नु पर्यो, त्यो पनि एयर एम्बुलेन्सबाट करिब अर्धचेत अवस्थामा उहाँलाई लिएर ।
डाक्टरहरू, नेपाल सरकार र नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिबीच गहन छलफल गरी जोखिम न्युनीकरणका लागि बैंकक लाने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय अनुसार २०७१ वैशाख १७ गते टिचिङ अस्पतालबाट सिधै एयरपोर्ट पुर्याएर एयर एम्बुलेन्सबाट बैंकक लगिएको थियो । जहाजमा उतैबाट आएका तीनजना स्वास्थ्यकर्मी र यताबाट बिरामीसहित डा. दिव्या सिंह शाह र राजेश वज्राचार्य गएका थिए । तीन घन्टाको हवाई यात्रापछि उहाँलाई अस्पताल पुर्याएर भर्ना गरियो । त्यस रात राजेश उहाँको साथमै बसे र डा. दिव्या सिंह शाह नेपाली दूतावासमा गएर सुत्नुभयो । जहाजमा केपीजीले जापानिज खाना सुसी खानुभएको थियो रे ।
१८ गते बिहान पनि डोरनाथजीसँग सम्पर्क गरी स्थितिको जानकारी लिएँ । पछि राजेशले मोबाइलमा उताको सिमकार्ड राखेँ भनेर फोन गरे । फोनमा कुरा गर्दा ऊ अलि बढी अत्तालिएको छ जस्तो लाग्यो । उसको बोल्ने तरिकाले म झन् छट्पटिएँ, पानीबाट निकालेर बगरको तातोमा पछारिएको माछा झैँ । तर के गर्नु टाढा छ । त्यसपछि इन्द्र, शीतललाई बैंककमा सम्पर्क गर्ने फोन नम्बर दिएर म एयरपोर्टको लागि घरबाट निस्किएँ । मलाई एयरपोर्टसम्म पुर्याउन गएका इन्द्र भण्डारी, लोकबहादुर भण्डारी, र किसान श्रेष्ठ अनि त्यहीँ भेटिएका सुभाष, यादव खनाल र नवराज ढकालसँग बसेर चिया खाएँ । चिया खाँदै गर्दा पनि मेरो मन छट्पटीले उतै दौडिएको थियो । एयरपोर्टबाट उडानका सबै प्रक्रिया टीजीकै एक जना नेपाली स्टाफले पूरा गरिदिएका थिए ।
काठमाडौंको एयरपोर्टभित्र टीजीको बिजनेस क्लासको लागि एउटा भव्यलन्ज र रेष्टुरेन्ट रहेछ । आफूमा पैदा भएको बेचैनी र छटपटीले, यो मैले पछि मात्र याद गरेँ । पहिलो पटक नेपालको एयरपोर्टभित्र पनि यस्तो स्थान देख्न पाएको थिएँ । जहाज अवतरण हुने समयमा ठूलो पानी पर्नाले बोर्डिङ पास केही ढिलो भयो । अन्त्यमा दिउँसोदुई बजेतिर जहाज उड्यो । जहाजको यात्रा अवधिभर मनमा अनेकौँ शङ्का र डर बोकेर बसिरहेँ । बैंकक पुगेर एयरपोर्टका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सिधै अस्पताल गएँ । म अस्पताल पुग्दासाँझको ७ बजिसकेको थियो । हतपत उहाँलाई राखिएको कोठा नम्बर ११११ मा पसेँ र उहाँलाई हेरेँ । म आइपुगेँ भनेर जानकारी दिन खोजेँ । तर उहाँ अर्धचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । कोठामा डा. दिव्या सिंह, सुरज र जेनी थिए । उहाँको स्थिति राम्रो छ जस्तो लागेन ।
आखिर जे भए पनि सहनु बाहेक मेरो सामु अरु बिकल्प थिएन । यसैबीच डा. दिव्या सिंह शनिबार बिहान नेपाल फर्कने कुरा भयो । अनि मलाई लाग्यो कि त्यहाँका डाक्टरहरूसँग कुरा गर्नका लागि भए पनि हाम्रो साथमा एकजना नेपाली डाक्टर हुनुपर्छ । यो अनुभव मैले पहिले पनि गरिसकेकी थिएँ । त्यसैले मैले डा.दिलिपलाई शुक्रबार नै बैंकक बोलाएँ । राति मलाई खान र सुत्न सुरजको घरमा बोलाइएको थियो । उहाँको स्थिति नाजुक भएकोले म गइनँ । बरु आफू रातभर बसेँ र राजेशलाई सुत्न दिएँ ।
अस्पताल बसुञ्जेल मेरो र राजेशको बास अस्पतालको सोफामै भयो । राति एक दुई बजेसम्म एक जना सुत्ने अर्कोले कुर्ने, अनि बिहानसम्म अर्को सुत्ने गरेर हामीले समय मिलाएका थियौँ । एक हप्ता जति पछि मेरो र राजेशको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर रातको लागि एकजनानर्सको व्यवस्था गर्न लगाएँ । ती नर्स यस अस्पतालको स्टाफ थिइनन् । सुरुको अवस्थामा त्यहाँका डाक्टरहरूले केपीजीको बाँच्ने सम्भावना २० प्रतिशत मात्र छ भनेका थिए । हुन पनि अस्पतालमा हुँदा समेत धेरै दिनसम्म उहाँलाई टाउको दुख्न निको भएन । उहाँको टाउको दुखेका बेला हामीलाई हेर्न र सहन समेत निकै गाह्रो हुन्थ्यो । तर,त्यो पीडादायी दृश्य हेर्नु पर्ने बाध्यता थियो । एक पटक उहाँको ढाडबाट पानी निकाल्दा दुखेर उहाँ जोडजोडले कराउनुभो । त्यसबेला मेरो छाती नै फुट्ला जस्तो भयो । सायद,पानी निकाल्ने डाक्टर अलि नयाँ थिए कि ? नत्र त्यति साह्रो कराएको मलाई कहिल्यै अनुभव छैन । उहाँ अर्धचेत अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो । अनि अस्पतालका कोठाको भित्तामा झुण्ड्याइएका तस्बिरहरू हेरेर तिनीहरूलाई बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल आदिको तस्बिर भन्नुहुन्थ्यो । यसरी स्मरणशक्ति पनि हराएको थियो । यस स्थितिमा एक हिसाबले उहाँको आश मैले गुमाइसकेकी थिएँ ।
यसरी मानसिक र शारीरिक दुबै हिसाबले तनावको स्थिति भोग्न बाध्य भइरहेकै बेला अर्को एउटा तनाव आइलाग्यो । मे चार तारिख आइतबारको दिन म सुरजको घरमा खाना खाएर अस्पताल जान निस्किएकी थिएँ । आइतबार भएको हुनाले त्यहाँ ट्याक्सी धेरै आउँदैनन् । अलिपरसम्म गएर टयाक्सी लिउँला भनेर घरबाट अलि पर पुगेकी थिएँ । यत्तिकैमा दुईजना मान्छेले मोटरबाइक हुइँक्याएर ल्याए । उनीहरू ठक्कर देलान् जसरी आइरहेका थिए । त्यसरी आफूतिर हुइँक्याएर आएको देखेपछि म अलि परतिर सरेर बसेँ । सडकको किनारतिर सर्न लाग्दालाग्दै फुत्त मेरो ब्याग खोसेर दुई वटा मोटरबाइक त्यहाँबाट भागे । नम्बर हेर्न त खोजेँ । तर आँखाले भ्याएन । म अक्क न बक्क भएँ । ब्यागमा मेरो सम्पूर्ण पैसा, गहना, मोबाइल, पासपोर्ट, चस्मा आदि थिए ।
म सधैँ जहाँ पनि प्राइभेट गाडीमा हिँड्ने भएर ब्याग सुरक्षित ढंगले बोक्नुपर्छ भन्ने ख्यालै भएन । दोस्रो,बैंककमा दिउँसै लुटिन्छ भन्ने सोच्नै सकिन । तेस्रो, श्रीमानको हालतले गर्दा मेरो होस ठेगानामा थिएन कि जस्तो पनि लाग्छ । जेहोस्, जिन्दगीमा पहिलो पटक धेरै सम्पत्ति गुमाउनु पर्यो । यसरी बाटोमा लुटिएपछि मैले जेनी र सुरजलाई घटनाको जानकारी गराएँ । पछि सुरज, दिनेश, निता र सुनील घटनास्थल आइपुगे र रिपोर्ट दिन भनेर पुलिस स्टेसन पुगे । थाइ भाषा जान्ने निताले सबै विवरण सहित निवेदन दिइन् । भोलिपल्ट पनि म एक चोटि पुलिस स्टेसन गएँ । तर सामान फिर्ता आउने सम्भावना देखिएन । यसरी दुःखमाथि दुःख बेहोर्नु पर्यो । तर मैले यो कुराको जानकारी केपीजीलाई दिइन ।
हामी अस्पतालको स्वीट रुममा बसेको हुनाले खान,बस्न,आराम गर्न नुहाइधुवाइ गर्न समस्या थिएन । अस्पतालमा नर्सिङ सेवा धेरै राम्रो थियो । सरसफाइ शिष्टता पनि त्यस्तै राम्रो थियो । आवश्यक सामग्रीहरू पानी, जुस, चिया, कफी, टावेल आदि मनग्य छन् । खाना तताउने ओभन, पानी उमाल्ने भाँडो, खाना खाने प्लेट, चम्चा, कचौरा आदि सबै छन् । नाम मात्र अस्पताल, सुविधा सबै स्टार होटलको भन्दा कम छैन । मे ६ तारिखको साँझ दूतावासका डीसीएम डोरनाथजी आएर औपचारिक रूपमा डाक्टरसँग कुरा गर्नुभयो ।
डाक्टरले अहिलेको लागि खतरामुक्त छ भनेर रिपोर्ट गरे । यसपछि अलि आशा पलायो । तर पनि कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदा बिरामी कुर्न गाह्रो छ । बेडबाट खस्ने, लड्ने हो कि भनेर सधैँ सतर्क हुनु जरुरी छ । उहाँले ७ मे को बिहान उठेर ट्वाइलेटमै गएर दिसा, पिसाब गर्नुभयो । सायद दुई महिनापछि चियरमा बसेर भए पनि नुहाउनुभयो । बाथरुमदेखि सोफासम्म वाकरको सहायताले हिँडेर जान्छु भन्नुभयो । खाना पनि अलि खानुभयो । ६ मे मा वान्ता पनि भएन । ५ मे मा ढाडबाट निकालिएको पानीमा इन्फेक्सन छैन भनेर खबर आयो । अस्पतालमा भेट्न आउने साथीभाइहरू नेपालका नेता, कर्मचारी आदिको बारेमा आपसमा खुलेर गफ गर्छन् । हामीले कुरा नगरे पनि समय बिताउन सजिलो नै थियो ।
मे ८ तारिखको बिहान काँग्रेस पार्टीकी नेता मैयाँदेवी श्रेष्ठ र उहाँका सहयोगीहरू केपीजीलाई भेट्न आउनुभयो । श्रेष्ठजी स्वयं महिनाको एक पटक फलोअपको लागि यहाँ आउने गर्नुहुँदो रहेछ । उहाँले यो राम्रो अस्पताल हो, अस्ति नै केपीजीलाई यहाँ ल्याउनु पर्ने भनेर कराउनुभयो । तपाईंले नेपालमा धेरै गर्नु छ, तपाईं साँच्चैको नेता हुनुहुन्छ भनेर बूढी मान्छे भावुक हुनुभयो । उहाँको साथमा अरु तीन जना सहयोगीहरू थिए । आज पनि केपीजीको अवस्था राम्रै रह्यो । नुहाउने, खाने राम्रो भएको छ ।
आज थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी सैनिक शासन लागू गरेको हुनाले बाहिरी वातावरण अलि तनावपूर्ण होला । तर नेपालमा जस्तो उथलपुथलको स्थिति यहाँ भएको सुनिएन । मे ९ तारिखको बिहानै डा. दिलिप नेपाल फर्किनुभयो । उहाँको ठाउँमा डा. धर्मकान्त बास्कोटा दिल्ली हुँदै बैंकक आउनुभयो । तर आज खाना खाएपछि केपीजीले वान्ता गर्नुभयो । त्यसले उहाँलाई झन् शिथिल बनायो । साँझ, हिमालय किचनबाट एक जना नेपालीले खानामा मम र रोटी लिएर आउनुभयो । उहाँ पहिले पनि भन्ते बौद्ध भिक्षुको रूपमा बैंकक आउनुभएको रहेछ । आज राति एक बजेदेखि बिहान सवा ५ बजेसम्म म बिरामीकै कोठामा बसेँ । उहाँले मलाई ‘तिमी यहीँ बस म सुत्न सक्दिनँ’ भन्नुभएको थियो । फेरि तिमीलाई धेरै दुःख भयो भनेर चिन्ता पनि गर्नुभयो ।
यता उचपार खर्च सरकारले दिने निर्णय भए पनि आजसम्म कुनै रकम नपठाउँदा ठूलो तनाव भइरहेको थियो । एयर एम्बुलेन्सको समेत भुक्तानी भएको छैन । यसैबीच इन्फेक्सन्स् हेर्ने फिजिसियन डाक्टर बिहानै आउनुभयो । हिजोेको रिपोर्ट राम्रो छ भन्नुभयो । यहाँ आएदेखि तीन पल्ट ढाडबाट पानी निकालेर गर्ने टेस्ट गरिसकेको छ । फेरि घरीघरी म आँखा देख्दिन भन्नुहुन्छ । त्यसैले आँखाको चेकअपको लागि सम्बन्धित विभागमा लगियो ।
१२ मे मा पनि स्थिति हिजोको जस्तै राम्रो छ । व्यायाम पनि गर्नुभयो । गीत, गजल सुनेर आनन्द लिनुभयो । आज डा. बास्कोटा नेपाल फर्किनुभयो । अब को आउनुहुन्छ थाहा छैन । बिहानदेखि रातिसम्मका औषधिहरू हेर्छु अत्यास लाग्छ । यति धेरै औषधि खानु पर्छ । आज साँझबाटै मुखको पाइप पनि हटाइयो । यसले गर्दा खान, बस्न अलि सजिलो भयो । यता नेपाल सरकारले केही रकम जम्मा गर्यो रे भन्ने खबर पनि आयो । अमेरिका बस्ने राजेन्द्र ओलीको साथी भनेर राजु सुवेदी भेट्न आउनुभयो । अनि राति डा. शक्ति बस्नेत पनि आउनुभयो । विष्णु पौडेलजीले फोन गर्नुभयो ।
आज बिहान माधव नेपाल बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको खबर सुनेँ । उहाँको नाममा एउटा पत्र लेखेर शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरी पत्र पोस्ट गरेँ । त्यस पत्रमा मैले जानीजानी नै म संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली भनेर लेखेकी थिएँ । त्यस पत्रबारे नेपालमा खुब टिप्पणी भयो रे भन्ने सुनेकी थिएँ
वैशाख ‘डे’को उपलक्ष्यमा नेपालबाट १७ जनाको टोली भियतनाम गएको र फर्किने क्रममा बैंकक पनि घुम्ने भनेर आएका थिए । ती मध्ये मेरो माइती पाटनका नारायण अवाले, (११ नं वडा अध्यक्ष) बाबुकाजी र गोपाल महर्जन हामीसँग भेट्न जेनीसँग अस्पताल आएका थिए । अस्ति मात्र आर्मी पाइलटको तालिममा आएका दुईजना पनि भेट्न आएका थिए । हिजो अस्तिदेखि दिनको दुई पल्ट फिजियोथेरापीको लागि ‘उहाँलाई एम–फ्लोर’मा लाने गरिएको छ । भोलिदेखि मुख्य रोग मेनेन्जाइटिसको झोल औषधि खुवाउन बन्द गरी अरु औषधि दिने कुरा डाक्टरले भन्नुभयो । यसको मतलव स्लाइनको लागि राखिएको पाइप हट्ने भयो । यो पनि खुसीको खबर हो ।
१८ मेको दिन बिहान७ बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म म आफ्नै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि व्यस्त भएँ । साँझ मैले टाउको अलि भारी छ भनेपछि उहाँले चिन्ता गर्नुभयो । अनि उहाँलाई सान्त्वना दिन पनि मैले आफू फ्रेस भएको देखाउनु पर्यो । धेरै लामो समयको अस्पताल बसाइ र चिन्ताले गर्दा अलि बिसञ्चो होला कि भन्ने डर मनमा त थियो नै । १९ मेको दिन डा. शक्ति बस्नेत आएर किड्नी फाउण्डेसनको तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ्यलाभको फ्रेम सहितको पत्र दिएर जानुभयो । उहाँले हिजो ‘विकेन मार्केट’ जाँदा मोबाइल हराएको कुरा गर्नुभयो । आज मैले उहाँको क्यानेला राखेको ठाउँमा ड्रेसिङ् गरिदिएँ । यस्तैमा एकाउन्ट युनिटका एक जना स्टाफ आएर पैसा धेरै बाँकी देखियो, केही भए पनि आजै जम्मा गरिदिनु भनेर गए । त्यसपछि मैले दूतावासमा फोन गरेर यो जानकारी दिएँ । यता दिनको दुई पल्टको फिजियोथेरापीले उहाँलाई राम्रो हुँदै गइरहेको थियो । आजदेखि रातिको ड्युटीमा थाई नर्स नै आइन् । फिलिपिनो नर्ससँग व्यवस्थापनको केही समस्या पर्योजस्तो लाग्छ । फिलिपिनोहरू खर्च कम गर्न शहरी क्षेत्रभन्दा टाढा बस्ने गर्दछन् रे भन्ने सुनेकी थिएँ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भाइकाजी श्रेष्ठ र म्याडम आजै भेट्न आउनुभएको थियो । म्याडमको पनि एपोइन्टमेन्ट रहेछ । उहाँले छोराको उपचार पनि यहीँ गरेको भन्नुभयो । २२ मेको दिन दिउँसो१२ बजेदेखि एक बजेसम्म केपीजीले अन्नपूर्ण पोष्टका लागि दिल्लीमै बसेर अन्तरवार्ता दिनुभयो । राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म बैंककमा कफ्र्यू थियो । यसले म्याक डोनाल्डसम्म बन्द भयो । राति डा. गोपाल सिवाकोटी पनि भेट्न आउनु भएको थियो । फोनमा माधव ढुंगेलसँग नेपालमा कुरा गरेँ । केपीजीले गृहमन्त्री बामदेव गौतमजीसँग कुरा गर्नुभयो । २३ मे, आज केपीजीको डिस्चार्ज हुने दिन । मनमा एक प्रकारको खुसी छाएको छ । अर्कोतर्फ डर पनि छ । उपचारका क्रममा लागेको सबै रकम भुक्तानीबिना डिस्चार्ज हुँदैन भनेकोले हिजोदेखि नै प्रयास भइराखेको थियो । भुक्तानी सम्बन्धी दिनभरको तनावपछि बल्ल डिस्चार्ज भयो ।
त्यसपछि म दूतावास फर्कें । कोठाका छरपस्ट सामान मिलाएँ । फोनबाट उहाँको अवस्थाबारे जानकारी पनि लिँदै गएँ । अर्कोतर्फ मैले फेरि पैसा खोज्नुपर्ने भयो । साँझको रिपोर्टमा सुधार आएको हुनाले उहाँलाई राति पहिलेकै कोठा ११११ ‘ए’मा सार्ने कुरा भएछ । म फेरि अस्पताल गएँ । राजेश र म अस्पतालकै सोफामा सुत्यौँ । भोलिपल्ट डा. सिरा र डा. इन्फेक्सनरी आएर जाँचेपछि आजै डिस्चार्ज हुने भयो । डिस्चार्ज नभएको भए हामी तनावमै हुन्थ्यौँ । एक दिनको मात्र शुल्क भएकोले पैसा पनि पुग्यो । यसरी २९ मे तदनुसार १५ जेठ २०७१ को गणतन्त्र दिवसका दिन राति फेरि हामी दूतावास आएर बस्यौँ । धेरै थकानले गर्दा दूतावासको कार्यक्रममा जान पनि सकिएन । ३० मे को बिहान फेरि अस्पताल गएर उहाँको रगत जचाइयोे । आजको रिपोर्टमा पोटासियमको मात्रा ५ दशमलव २ आयो । यसपछि उहाँले तीन दिन फलफूल खान बन्द गर्नुभयो । पोटासियम कम हुने खानाको चयन गरी खान दिएँ । यसपल्ट उहाँलाई पोटासियम वृद्धिले सतायो । अस्ति दिल्लीमा पोटासियम नपुग्ने समस्याले सताएको थियो । त्यसपछि हामी ३१ मे र १ जुनमा फिजियोथेरापीको लागि अस्पताल गयौँ । दुई जुनमा फेरि परीक्षण गरायौँ । आजको रिपोर्ट अलि राम्रो आएको हुनाले धेरै दिनपछि हामीले आनन्दले स्वाद लिएर खाना खायौँ ।
धेरै दिनपछि २६ जेठ २०७१ को दिन काठमाडौंको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न जाने भनेर उहाँले दौरासुरुवाल, कोट र टोपी लगाउन खोज्नुभयो । यसबेला मेरा आँखाबाट हर्षका आँशु बग्नथाले । मलाई उहाँले यसरी दौरा सुरुवाल लगाउन पाउनु होला जस्तो लागेको थिएन । पछि २०७३/०७४ सालतिर उहाँको हर्नियाको अपरेसन गर्न उही बुमरुङगार्ड अस्पताल बैंककमा चार पाँच दिन बसेका थियौँ । उक्त समयमा एउटा औषधि समयमा खान छोड्दा मुटुको चाल बढेर एक दुई घन्टा थप समय ‘अपरेसन पोस्टवार्ड’मा बस्नु परेको थियो । (शाक्यको मेरा अनुभूति पुस्तकको एक अंश)